Ụzọ dị irè nke iguzogide ọrịa na pests nke Aronia - Akuru - 2020
Chokeberry nwere ezigbo nsogbu, ya mere, ọrịa na pests na-echegbu ya nke ukwuu. Otú ọ dị, enwere ike nke ọrịa ahụ nwere ike ịdịgasị iche dabere na ọnọdụ ebe, ihu igwe, nso nso na osisi ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịma ụdị pests na ọrịa ndị a ga-ezute mgbe ị na-eto chokeberry iji zere nsogbu na osisi ahụ. Mgbochi chokeberry site na ọrịa na pests bụ ihe dị mfe, ụfọdụ usoro na-enyere aka ịlụ ọgụ ọtụtụ pests n'otu oge, n'ihi ya, a na-atụ aro ka ị gbaso ndụmọdụ nile iji chebe osisi dị ka o kwere mee.
Necrosis bacteria, ma ọ bụ ọrịa cancer
Ihe mgbanaka mberede
Mkpụrụ Rot, ma ọ bụ Moniliasis
Mkpụrụ osisi na-asụ osisi
Otu esi emeso ugwu ash pests
Osisi na-acha odo odo na osisi uhie
Rowan na mining moths
Olee otú esi emeso ọrịa nke ugwu ash
Aronia bụ ihe na-arịa ọrịa. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, osisi ndị a ka na-ata ahụhụ site na ọrịa na-egosi mkpụrụ osisi ndị ọzọ na osisi beri.
Ọrịa a dị ize ndụ maka osisi na-eto eto na-adịghị ike. Na nhazi mbụ, obere aja aja na-apụta n'elu epupụta; oge ntoju dị ọcha nwere ike ịmalite n'akụkụ ala nke akwukwo. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ọrịa ahụ, epupụta akpọnwụ kpamkpam ma daa. Ọ bụrụ na ịchọta mgbaàmà nke ọrịa a na osisi gị, mgbe ahụ, ọ ga-efesa ya na 1% ngwọta nke Bordeaux ngwakọta. A ghaghị iwepụ akwụkwọ niile dara ada ma mebie emebi ngwa ngwa, nakọtara ma bibie.
Ụdị ebe a na-ahụ ebe a na-ejiri oghere na-acha aja aja na-acha aja aja na-agbanye ugwu. Ọ nwere ike ịpụta na etiti okpomọkụ ma na-eduga na nchịkọta zuru ezu nke anụ ahụ n'ime ntụpọ. Dịka ọ na-egosi ụdị ntụpọ ndị ọzọ, maka mgbochi na nrịbama mbụ, a na-eme ọgwụgwọ Bordeaux, a na-achịkọtakwa akwụkwọ niile ahụ mebiri. A na-ejikwa ya mee ihe maka agha ahụ. A na-emeso ohia na ala n'okpuru ya na ọla kọpa oxychloride na Abiga-Pik maka ọrịa ndị a.
Ọrịa a nwere ike ime ka nnukwu nkume na mkpụrụ osisi kụrụ. Aronia adịghị arịa ọrịa a mgbe mgbe, dịka ọmụmaatụ, aprịkọt, cherry, ma ọ bụ piich. Mgbaàmà yiri nke ọrịa cancer na mkpụrụ osisi pome. Na oge opupu ihe ubi, ha yiri oku ọkụ, ma ọrịa a na-emetụta ihe niile anụ ahụ na akụkụ nke shrub, otú ahụ ka ụdị ngosi ahụ pụrụ ịdị iche.
Ọ bụrụ na ọrịa ahụ na-agafe agafe, mkpụrụ osisi, Ome na okooko osisi na-agbanye ngwa ngwa ma gbanwee aja aja, ma egbula, kwụgide n'elu osisi ruo ogologo oge. Ị gaghị ahụ ọnya ọnyá na ogbugbo, ma n'okpuru nduzi nke toxins na-ebute nje bacteria, ogbugbo ahụ jupụtara na mmiri, na-agba aja aja, mgbe ahụ ọ na-agbanwe oji ma mesịa nwụọ. N'okwu a, a na-enwe mmetụta na-esi ísì ụtọ sitere na ogbugbo ahụ, nke yiri mmiri ọṅụṅụ fermented.
Ọ bụrụ na ị na-agwọ ụdị ọrịa ndị dị otú ahụ, ọ gaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na ịchọta ọrịa na nhazi mbụ, mgbe ahụ, a ga-arụchaa osisi niile metụtara alaka na ijide osisi anụ ahụ dị mma 8-10 cm n'okpuru ọdụm ahụ.
Mgbe nhazi ya dị mkpa iji kpochapụ ngwá ọrụ ahụ 5%, ma ọ dị mkpa ka ị nyụọ ebe ndị ịkpụ na ogige putty. Ọ bụrụ na ọrịa ahụ adabaala osisi ahụ, ọ ga-efopụ ọhịa kpam kpam ma kpọọ ya ọkụ, na-ezere ihe ọkụkụ ọhụrụ dị n'akụkụ ebe a.
Mgbaàmà nke ọrịa a bụ agba odo na-acha odo odo na epupụta, nke, mgbe a na-emetụ ya n'ahụ, jikọta na ịmepụta ihe mgbochi. Ka oge na-aga, epupụta nke ugwu uzuzu na-abawanye uru, na-agbakasị, wee chigharị ma daa. Iji luso ọrịa a ọgụ, ọ dị mkpa iji wepu ngwa ngwa ahụ ma kpochapụ ha.
Ọrịa ọrịa na-emetụta ọrịa na-emetụta usoro mgbọrọgwụ. Ihe kpatara ọrịa a bụ ogbu na nkwonkwo nke gbanyere mgbọrọgwụ, nke na-eme ka osisi ahụ ghara ịdị ike. Ọ nwere ọdịdị akpụkpọ anụ brownish-agba ntụ. Mgbochi gụnyere ọgwụ nhazi na Bordeaux mortar n'oge opupu ihe ubi na ụbịa, nakwa ọla kọpa oxychloride na Abigak-Pik.
Nke a na ọrịa yiri apple mkpụrụ ire ere. Ọganihu na oke iru mmiri. Ọ bụrụ na ihu igwe na-akọrọ ma na-ekpo ọkụ, anụ ahụ mebiri emebi ga-akpọnwụ ma mbibi nke nwa ebu n'afọ ga-akwụsị. Ma site n'inwekwu iru mmiri, usoro a maliteghachi.
Ị ma? Ihe kpatara kpatara ọrịa a - ngwụcha oge owuwe ihe ubi. Na-anakọta mkpụrụ n'oge, ọrịa a agaghị egbochi gị osisi.
Rowan nwere ike ịnata site na ọrịa dịka nbibi nke osisi, bụ nke mushrooms kpatara. Iji merie ojiji mmiri mmiri Bordeaux ma ọ bụ ndị ọzọ fungicide. A ghaghị iwepụsị ọkụ na ọkụ, na mgbọrọgwụ.
Ọrịa ọrịa a nke chokeberry na-emetụta ụmụ okorobịa na Ome. Ka oge na-aga, ebigbote na-acha ọcha na-egosi na ha, ma n'oge mgbụsị akwụkwọ, ha na - agbanye ntụpọ aja - na steeti a, nsị ahụ na - atụgharị. Ọrịa a nwere ike ịkụda osisi ahụ n'ụzọ dị ukwuu, karịchaa ma ọ bụrụ na igwe na-ekpo ọkụ na mmiri. Iji kpoo powdery mildew n'oge oge na-eto eto, a ghaghị imerụ sọlfọ na lime (dịka nke 2 ruo 1) na nchịkwa nke 0.3 g / sq. M. Jide n'aka na ichikota ma gbaa ahihia dara.
Mgbe ụfọdụ, chokeberry na-arịa ọrịa a na-akpọ ajari. Onye na-akpata ọrịa a na-akpata ọrịa na-akpata ọdịdị odo odo na epupụta. Mkpịsị niile nwere ntụpọ agba aja aja - ogwe osisi dị n'akụkụ elu nke epupụta. N'ọdịnihu, ero ahụ na-amalite na osisi junipa, ya mere ọ dị mkpa iji kpuchie akuku nke chokeberry sitere na osisi a. Dịka ọgwụgwọ maka nchara, a na-eji osisi mmiri Bordeaux na-emepụta osisi ahụ, a ga-ewepụkwa alaka ndị ahụ metụtara.
Ngwurugwu nke mkpụrụ osisi ndị ọzọ a na-akọ pụkwara ime ihe na-eme ya. Ma osisi nwere ezigbo nsogbu, n'ihi ya, i kwesịghị ichegbu onwe gị banyere ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ osisi ndị ọzọ na-amị mkpụrụ dị nso, mgbe ahụ, ọ bara uru iji nlezianya nyochaa ihe aronia iji wepụ pests ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọnụ ububa a diurnal nwere ike iru 7 cm. Ndi anu mmiri ya mebiri epupụta nke osisi. Ọ na-eme na oge opupu ihe ubi, n'oge a, pesti na-amalite ọrụ ya. N'oge budding, caterpillars na-eri ha, ma kpochaa epupụta okooko osisi. N'ime etiti oge okpomọkụ, ihe ndị a na-adaba nsen, ọtụtụ mgbe n'elu akụkụ akwukwo.
Ị ma? Otu n'ime ụmụ nwanyị nwere ike iburu nsen 500.
Tupu ịmalite ịmalite, ọkpụkpụ nwere ike ịkụnye ya na ụmụ ahụhụ dị iche iche maka prophylaxis, dị ka:
Tupu budding, osisi nwere ike na-atụgharị ya na Olekupri, Nitrafen.
Ọ dị mkpa! Ọtụtụ mgbe, butterflies nke hawthorn na-eri nri na pollen nke ahihia osisi, ya mere ha ekwesịghị ekwe ka oge ntoju n'ogige.
Na chokeberry ị nwere ike mgbe ụfọdụ ịchọta ikpo akwụkwọ nke na-eri akwụkwọ. Iji luso ha ọgụ, jiri karbofos (10 g kwa 10 lita mmiri) ma ọ bụ Chlorofos (20-30 g kwa 10 lita mmiri).
Ihe ize ndụ a dị ize ndụ nwere ike ịbacha akwụkwọ dum, na-ahapụ naanị nnukwu streaks. Ha na-apụta nke ọma na njedebe nke ọnwa July, na-agbakwunye osisi ahụ maka otu ọnwa, wee gaa n'ala. Ube ndị ahụ bụ ihe yiri ya ma kpuchie ya na oké ọchịchịrị.
Iguzo ahihia nke mucous ji nghota ozo:
ngwọta nke "Chlorofos" ma ọ bụ "Malathion";
Nkwụsịtụ nkwonkwo ngwọta;
soda ash ngwọta.
A na-eme ihe nkedo maka oge mbụ mgbe okooko gasịrị, mgbe ahụ, ugboro 2 ọzọ kwa izu.
Ọ dị mkpa! Otu ọnwa tupu owuwe ihe ubi, a ghaghị ịkwụsị ọkpụkpụ ọ bụla. Ị nwere ike iji ngwọta nke soda ash.
Nke a na-emetụta ihe ndị na-acha akwụkwọ ndụ na n'elu nke Ome ahụ, na-eme ka ha na-amị ma na-akọrọ. Ụmụ ahụhụ ndị a dị ntakịrị, ruo n'ogologo mita 3.5 n'ogologo. Ụmụaka na-eto eto na-ata ahụhụ ọtụtụ site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ apple aphid. Na oge nke blooming buds na tupu okooko, ha na-emeso ya na ụmụ ahụhụ iji tufuo larvae nke apple aphid. Iji luso aphids ọgụ, ọ dị mkpa iji ịgba "Nitrafen" mee ihe nkwalite, "Karbofos", "Olekuprit", wdg.
Ihe ndị a nke chokeberry na-egosi n'oge mkpirisi ezumike. Larvae melt, na-ahapụ onwe ha skins larval na ogbugbo alaka. N'ihi nke a, alaka na-enweta ego ọlaọcha, n'ihi ya, ọ gaghị ekwe omume iji mgbagwoju anya kpoo ụdị ọrịa a na ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na enwere ọnyá siri ike, a na-emegharị "Olekupkrit" na "Nitrafen", ma nke a ga-eme tupu oge ezumike.
N'oge opupu ihe ubi Aronia kwesiri ka a ghagharia ya na acaricides ("Zolon", "Malathion", "Tedion", wdg). Eji ọgwụ dị iche iche eme ihe dị mkpa n'ihi na ọ bụ nanị otu n'ime ha ka a na-eji mee ka akọrọ ahụ nwee nsogbu. Iji mee ngwa ngwa belata ọnụ ọgụgụ nke akọrọ, ọ dị oke mkpa igwu ala n'okpuru osisi, yana ịchọta ma na-ebibi mkpụrụ osisi dara.
Nke a na-acha uhie uhie na-acha odo odo na ogbugbo, na-agbalị ịbịaru nso na osisi succulent. Ihe nile dị mkpa nke mpaghara a na-eme kpọmkwem mgbe osisi ahụ abanyela n'ụgbụgbọ ahụ. N'okwu ndị dị elu, akwụkwọ nke Aronia rowan na-acha odo odo, n'ihi eziokwu na nri adịghị esi na alaka.
Iji merie pesti a, ọ dị mkpa iji kpochapụ osisi dum: ogwe, alaka na epupụta. Maka nhazi site na iji ọgwụ ọjọọ ndị a:
A na-emecha spraying mgbe okooko, a na-emeghachi usoro ahụ mgbe izu 2 gasịrị.
A pests na-emetụta mkpụrụ nke chokeberry. Caterpillars na-amalite iri anụ ahụ, na-agagharị site na amaokwu dị warara. Site na oghere ndị na-esi na ya apụta, protruder nke ihe ọṅụṅụ mmiri, mgbe ahụ, oghere ojii na-apụta, na mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ. Aronia anaghị enweta nnukwu mmebi, mana mkpụrụ osisi ahụ emetụtaghị eji ya eme ihe, ya mere, dịka ọdịdị nke ọrịa a, a na-ebelata owuwe ihe ubi ahụ. Iji merie moths na ndị na-egwuputa egwu, ọ dị mkpa igwu ala n'okpuru osisi, kpochapụ akwụkwọ ndị anakọtara, hichaa ogbugbo site na lichens na growths.
Ọ dị mkpa! Ịchịkọta ma bibie ndị kịtịkpa dị mkpa yana nests nke ududo, ma ọ bụghị usoro a agaghị enwe mmetụta ọ bụla.
Iguzo ndi mmadu na-ebuso agha agha na-enye aka site n'enyemaka nke ọgwụ ndi ozo na-eme ka ogwu azu. N'iji agwa osisi na-egwupụta akụ apụl, ọ dị mkpa iji ọgwụ na-ekesa aronia na ụmụ ahụhụ n'ihu okooko. Otú ọ dị, a ghaghị iburu n'uche na n'ọtụtụ ọnọdụ, ọgwụ ndị a dị irè nanị n'ịlụso ndị na-eto eto ọgụ.
N'ụzọ dị mwute, ụmụ nnụnụ na-eri nri dị iche iche, ya mere, ọ bụrụ na ha ahụ ubi gị, ị ga-alụrịrị ha ọgụ. Ụzọ kachasị dị irè bụ ihe ndị pụrụ iche site na nnụnụ, e nwere, n'ụzọ dị iche, usoro ndị ọzọ nke aka ha, ma ọ bụghị na ha dị irè. Dị ka ngwaọrụ ndị ahụ na-eji ihe na-egbuke egbuke (dịka CD / DVD diski), nke na-egbukepụ anyanwụ ma na-atụ egwu nnụnụ mgbe ị na-abịakwute bushes. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji scarecrows na-atụ egwu nnụnụ, yana ihe ndị, mgbe ha na-ejikọta ibe ha, mee ka ụda (dịka ọmụmaatụ, ikpo ọkụ nke alumini jikọtara ibe ya), ma ọ ga-ekwe omume na ọ gaghị atụ egwu nnụnụ ahụ, ụda ndị na-adịghị mma ga-ewe gị iwe.
Bright flower - orchid cymbidium. Nkọwa nke osisi na iwu nke ilekọta ya
Anyị na-elekọta lemon ụlọ n'ime ọdịda: ọ ga-ekwe omume ịghaghachi ihe nlekọta dị mkpa?
Otu esi eji Trisulfone maka rabbits
Asparagus Meier: nlekọta ụlọ